Ny fianarana: ny aterineto dia afaka mampiankin-doha | Valin'ny Fanamarinana
Home fianarana Ady anaty aterineto
Fantatrao ve fa misy olona mahita fa sarotra ny mifantoka amin'ny zavatra hafa ankoatra ny aterineto? Mandany fotoana bebe kokoa ve izy ireo mijery azy io? Lozabe ve izy ireo rehefa misy zavatra hafa manala azy?
iray mpitsabo aretin-tsaina hoy ny manodidina ny 80% ny tanora tiany dia tsy manana ny fahasalamana ara-tsaina izay atokisana azy ireo ary ny marika sy ny soritr'aretina dia mipoitra rehefa afaka telo herinandro mipetaka haingana. Ireo fepetra ireo dia ahitana fahaketrahana, ADHD / hametraka fitondran-tena sy bipolar. Amin'ny alàlan'ny fanesorana ny fampiasana aterineto mandritra ny herinandro vitsivitsy hijerena raha misy ifandraisany amin'ny asa aman-draharahany dia mety ho mpitsabo na mpiasan'ny fahasalamana no mahazo antoka fa marina ny fepetra ara-pahasalamana. Na dia toe-javatra mahazatra aza izy io, Dr. Dunckley dia milaza fa ho ratsy kokoa noho ny fisorohana ny aterineto izany.
Ny fiankinan-doha amin'ny Internet dia olana. Mifanaraka amin'ny fitomboany izany fisorohana ara-tsosialy sy ny fanahiana ara-tsosialy. Ny fahakiviana sy ny fankahalana dia miharatsy ny fiankinan-doha amin'ny Internet eo amin'ireo tanora.
Diary faran'ny herinandro telo
Tsara tarehy Victoria Dunley boky, “Avereno ny ati-dohan'ny zanakao - drafitra 4 herinandro hamaranana ny fihenan-tsofina, hampiakarana naoty ary hampitomboana ny fahaiza-manao ara-tsosialy amin'ny alàlan'ny famadihana ny vokatry ny fotoana elektronika.”Dia drafitra andrana sy voasedra hampiasain'ny ray aman-dreny hanampiana ny zanany tsy hahalala ny fahazaran-dratsy amin'ny fiankinan-doha amin'ny Internet. Na dia tsy mifandray mivantana amin'ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia aza izy dia mitovy ihany ny porofo. Ny programa dia maharitra telo herinandro, miampy izany dia mila herinandro fanampiny fanomanana mba hahazoana antoka fa mandeha tsara.
Ny fiankinan-doha amin'ny aterineto dia ny filokana, ny lalao video, ny media sosialy, ny fampiharana date, ny fivarotana ary ny pôrnôgrafia.
Ny fiankinan-doha amin'ny sary vetaveta amin'ny Internet dia mety hanimba kokoa noho ny filalaovana na ny fiankinan-doha amin'ny media sosialy satria mety handrava ny faniriantsika ara-nofo sy fitiavana ny olona tena izy.
2015 fikarohana Ny Fihetseham-pon'ny Onjam-panaon'ny Neuroscience: Ny fitsapana sy ny fanavaozana dia mitarika amin'ny fehin-kevitra hoe "ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet dia mifamatotra amin'ny sehatry ny fiankinan-doha ary mizara fitsipika mitovy amin'ny fanandevozan'ny fiterahana."
Ny soritr'aretin'ny fandevenana pôrnôgrafika dia matetika manindrona ireo aretina hafa. Mba hampisarahana ireo fepetra tena marina amin'ny adim-panafahan'ny pôrnôgrafia, ny safidy tsara indrindra dia ny manomboka amin'ny pôrnôjia haingana. Raha vao tafahoatra ny atidoha, dia afaka manararaotra ny fahatsapany ara-boajanahary izy.
Ny siansa amin'ny fiankinan-doha amin'ny aterineto
Ao amin'ity horonantsary ity ny bilaogera “Inona no Nianarako” dia manolotra fitsidihana efa voadinika tsara momba ny rafitra ati-doha manokana izay mahatonga ny internet (sy ny akora ary koa ny fitondran-tena) mampiankin-doha. Ny tanjon'izy ireo dia ny manampy ny mpijery hahafantatra ny fiantraikan'ny Internet amin'ny atidohanao ka tsy manomboka voafehinao ianao (17.01).
<< Tsy mahay mianatra